» जनकपुरको भाईरल जोडी पुजा ठाकुर र राजिव समरको चर्चा
जनकपुरको भाईरल जोडी पुजा ठाकुर र राजिव समरको चर्चा
३० भाद्र २०७७, मंगलवार २२:१०
चन्द्र घलान, मकवानपुर, ३० भदौ । विश्व प्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’ मा सहभागी भएका सबै स्टार र कोरियोग्राफरको जोडी अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेका छन् । चर्चित जोडीहरुमध्ये मैथिली समाजका चर्चित अभिनेत्री पुजा ठाकुर र चर्चित कोरियोग्राफर राजिव समर पनि एक हुन् । एकै ठाउँबाट कला क्षेत्रमा अघि बढेको यो जोडीले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पनि तहल्का मच्चाउँदैछन् । यस भिडियो सामग्रीमा पुजा र राजिवका बारेमा छोटकरीमा चर्चा गरिएको छ । हेर्नुहोस् यो भिडियो सामग्री–
पुजा ठाकुर मैथिली समाजका एक चर्चित अभिनेत्री हुन् । डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा कोरियोग्राफर राजिव समरसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी पुजाका म्युजिक भिडियोहरु पनि चर्चामा छन् । वि.सं. २०५३ साल भदौ ९ गते धनुषा जिल्लाको साविक सबैला गाविस वडा नम्बर ७ हाल सबैला नगरपालिकामा जन्मिएकी पुजा बाबु लालनारायण ठाकुर र आमा सिता ठाकुरकी जेठी छोरी हुन् । वि.स. २०६८ सालमा एसएलसी सकाएकी पुजाले २०७१ सालमा स्टाफ नर्सको अध्ययन सकाएकी थिईन् । जनकपुर निवासी पुजालाई उनकी आमा सरिता ठाकुर आफु नर्स भएकोले पुजालाई पनि नर्स बनाउन चाहान्थिन् । त्यसकारण पुजालाई उनकी आमाले नर्स समेत पढाउनुभएको थियो तर पुजाको रुचि भने नर्सिङमा भन्दा कलाकारितामा थियो । त्यसकारण पुजा कलाकारितामै लागिन् ।
मैथिली समाजमा कलाकारितालाई धेरै राम्रो नमानिने भएकोले सुरुमा नर्सिङ पेशामा लागेपनि पछि पुजाले नर्सिङ पेशालाई त्यागेर कलाकारितामा पाईला टेकेकी थिईन् । जनकपुरमा सिताको रोल निभाएर भाईरल भएकी पुजालाई धेरैले सिता माता भनेर चिन्छन् । पुजाले अभिनयका साथै जनकपुरधामको मुरलीसरमा ‘ए वन डान्स स्टुडियो’ संचालन गर्छिन् । अभिनय र नृत्यका अलावा लेखनमा पनि सक्रिय पुजाले नाटक, डकुमेन्ट्रीदेखि चलचित्रसम्म अभिनय गरेकी छिन् । नेपाली, मैथिली र हिन्दी भाषाका गीतहरुमा पनि मोडलका रुपमा काम गरेकी पुजाले देशबाहिरका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा पनि आफ्नो कला प्रस्तुत गरिसकेकी छिन् ।
राजिव समर चर्चित फिल्म कोरियोग्राफर हुन् । उनी निर्देशकका साथै क्यासेट फिल्मस् स्टुडियोका संचालका पनि हुन् । राजिव समरको वास्तविक नाम राजिव कुमार कर्ण हो । अहिले भाईरल भईरहेका विभिन्न गीतका म्यूजिक भिडियोका साथै चलचित्रहरुमा कोरियोग्राफी गरिसकेका राजिव समर नेपाली चलचित्र उद्योगमा एक चर्चित कोरियोग्राफरका रुपमा चिनिन्छन् । उनको कोरियोग्राफीमा नेपाली चलचित्रका धेरै गीतहरु चर्चामा आएका छन् । जनकपुर निवासी राजिव यस पटक डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा मैथिली अभिनेत्री पुजा ठाकुरसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । जनपुरबाट कोरियोग्राफी यात्रा सुरु गरेका राजिव अहिले काठमाडौँमा बस्छन् ।